Tajaajila Liqaa - Oromia International Bank
Baankiin keenya projektii fi hojii daldalaa milkeessuuf pirojektii hojjetame filannoo faayinaansii yeroo dheeraa fi gabaabaa maamiltootasaaf qopheessee jira.
Tajaajila liqaa gurguddoo:
Daangaa yeroo liqaa(Gabaabaa, Giddugaleessa fi yeroo dheeraa)
Haalduree Xalayaa LC qopheessuu
Qabeenyota hidaan qabaman hanga tokko faayinaansi gochuu
Faayidaa liqaa fi kaffaltii dursaa
Rakkoo kaappitaala hojiif nama mudatuu furuuf kan qophaa’edha.
Giddugala dingdee guddaa irraa hanga xiqqaatti kanneen akka Oomishaa, oomisha bu’aawwan qonnaa, Hoteela, Qonna, Ijaarsa Albuudaa fi pirojekiiwwan kana fakkaatan faayinaansi gochuuf dandeessisa.
Fedhii kaappitaala hojii guutuuf liqaa yeroo gabaabaa haala mijeessuun fedhii keessan ni guuta
Ulaagaa Faayiloota seera qabeessaa fi hordoffii yoo guuttan kenninsi tajaajilaa gahumsaa fi ariitii qabu ni kennama.
Ulaagaalee hundaa(Cheekiliistotni) yeroodhuma gaaffiin dhiyaatu dameewwan keenya irraa ni kennama.